Hooyo Soomaliyeed oo deriskeeda ka difaaceen guri si qasab ah looga saari lahaa dalka Britain (SAWIRO) - iftineducation.com
iftineducation.com – Naciima Cabdullahi oo ah Hooyo Somaliyeed ku nool magaalada Bristol ee wadanka UK ayaa warbaahinta wadanka Britain aad u hadal hayeen, iyadoo ay la soo darseen arin aad u yaab badan oo magaalada Bristol aan hore uga dhicin.
Naciimo iyo qoyskeeda waxay ku noolaayeen magaalada Bristol 12 sanno,iyagoo ka soo guuray wadanka Holland, gurigii iyada iyo qoyskeeda ay ku noolayeen wuxuu u baahday dayactir, kaasoo markii ay ku wargelisay milkiilaha guriiga “landlord” uu ku gacan sayray ka dibna maxkamad u soo diray si qasab looga saaro guriga.
Nick Ballard oo ah af-hayeenka Acorn Bristol ayaa warbaahinta u sheegay in arintan uu ku dhaqaaqay milkiilaha guriga iyo maxkamada ay tahay mid sharci daro ah oo aan la qaadan karin, qoyskan waa deriskeena sidaa awgeed waxaa nagu qasab ah inaan difaacno.
Sawirro kala duwan oo warbaahinta ay soo gudbiyeen ayaa lagu arkayaa in gurigga ay qoyska Somaliyeed ku noolyihiin uu u baahan yahay dayactir aad u farabdan, taasoo milkiilaha uu ku gacan sayray.
Afar waxyaabood oo biyaha ninka dib u dhiga si uu u qanciyo xaaskiisa xaraarade uu ugu kala goon ….
Dawlada Soomaaliya oo Maanta Jeedinaysa Doodii ugu Dambeysay ee Dacwada La Xiriirta Badda soomaaliya